» GGO: Sabboonummaan Oromoo maali? Eenyutu Sabboonaa ykn Sabboontuu dha? ---- Gadaa.com Oduu – News
Ebla/April 19, 2013 · Gadaa.com Abdii Boruutiin*
5 Comments	Ifaa said,
April 20, 2013 @ 7:09 pm
Abdi Boru, barreeffamoota kee bilchaatoo ta’an yeroo hundaa itti yaadde dhiheessituuf hedduu galatoomi. Keessahuu afaan Oromoo mi’aawaa fi qubee xaliilawaa ati barreessitu bayyeen itti gammada.. Barreeffama kee kana irratti waa lama jechuun barbaaada.
1. Sabboonummaan eeyyee ni baratama. It depends on your reality – depending on where you were born and who your parents are etc… dhalootuma irraa subboonaa taatee guddachuu ni dandeessa. Akkuma kana Oromoo irraa dhalattee waan Oromoo osoo hin beekin guddattee, san booda aadaa , seenaa kkf… Oromoo barattee subboonaa tahuu ni dandeessa. Waanuma Obbo Ibsaan dogoograniif atis duukaabuutee boolla bu’uu hin qabdu. Yoo barbaadde kanaaf fakkeenya hedduu sii kennuu nan danda’a. Bara 1991 Oromoonni kumoota dhibbaan lakkaawaman seenaa fi aadaa Oromoo baratanii subboonoo finiinoo ta’anii jiru, kun dhugaa dirree irra jiru. So obbo Ibsa’a assertion could not be far from the truth. Your case I think is just blind loyalty
2. Ani akka nama tokkootti Oromiyaan walaboomuu qabdi jedheen amana, gama kanaanis hangan danda’e gumaachaan jira. Gama biraadhaan ammo ani biyya ambaa keessan jira , xiqqaatus guddatus namni biyya guddate keessa jiratu jireenya sadoo jiraata. Haala Oromoonni fi jaarmayaaleen Oromoo biyya ambaa keessa jiran akka gaariittan quba qaba. Haala kana keessatti namoota bu’aa Oromootiif hojjatn hundaa nan kabaja subboonummaa isaaniis hin shakku. Maalif akka koo walabummaa Oromootti hin amanne jedhee hin balaaleffadhu. Maalif ? mammaaqsa Oromoo “sissiqaa goobana” jedhanittin amana. Daba waggoota dhobbaa oliif nu irratti raawwatamaa ture waggoota 20 fi soddomatti bade barbaadawwa amantaa jedhu hin qabu. Keessumaa iyyuu haala jaarmayootii ilaalcha akka kootii qaban keessa jiran yeroon ilaalu, jechuu koo ti. Kanaaf bifa kamiin iyyuu gabrummaa irraa sharafuun karaa fagoo gabaabsa jedheen amana. Fakkeenyaaf in principle yaada ODF hin deggeru, garuu akka isaan jedhan Itoophiyaan dimokraatawuu ni dandeessi taanaan, Oromoodhaaf bu’aa guddaa dha. Oromoon hidhaa fi ajjeechaa, arhatamuu jelaa bahee nagaan bahee galuu dandeenyaan, afaan adaa isaa guddifachuu dandeenyaa, mirga wal gahuu, yaada ofii bilisaan ibsachuu argannaan..bilisoome jedhuu dha. Walabummaa biyya isaaf ammo achi irraa ka’ee itti fufuun mirga isaa ti. Itoophiyaan ni diimkraatoftii fi ni dhiiftiin rakkoo keenya miti…warra jedhetu beeka, ni dandeenya erga jedhanii dhaqanii haa ilaalani, maalif balaaleffatamu ? maalif subboonummaan isaaniis shakkama. Yoo tarii akka tasaa milkoomaniif seenaa hojjetan jedhuu dha. Let them try. namoonni waan kun Oromoof ni tola jedhanii itti jiran kun silaa namootuma kara deemaa ta’e anis niin shakka. Garuu namooti kun namoota waggoota 20+ dhaaf utuu nuti hin dhalatin irraakaasanii qawwee kaasanii Oromoof lolaa turani dha. Kanneen subboonummaa ati baantu kana dafqaa fi dhiiga isaaniittiin magarsan keessaa tokko. Kanaaf yaa Abdii kiyyaa siinuu Oromummaa si barsiisanii ka’anii deebitee isaanuma kana suboonummaa isaanii shakkuun eessan akka inni nu gahu naa hin galu. Yeoon kana jedhu waan ati jedhuu barbaadde naa galuu didee osoo hin taane, akki nuti itti yaadnu jijjiiramuu qaba yaada jedhuufi. Abdi, this is now our reality, namooni akkasitti yaadan jiru ! mitii ? human keenya aati subboonaa dha ati miti jechuu irratti fixuu irra, jajjabeessanii akka isaan dhaqan gochuun gamnummaa natti fakkaata. Itoophiyaan yoo dimokraatofte Orommof bu’aa qabaachuu ni shakkitaa ? yoo milkaawaniif Oromoof bu’aa guddaa dha, yoo dadhabaniifis barnoota guddaa dha. My way or the highway ! jechuun dhaabachuu qaba. Namuu karaa itti fakkaateen haa yaalu. Oromoo miliyoon 40+ dhaaba siyaasaa tokko jelatti hirrisina jechuun abjuu dha. Baay’ina caalaa hani itti amane muratee hojechuutu irra caala. Mee ati sanaa fi kanaatti wal qoqqooduu dhiifnee karaa saba keenya itti aangessinu irratti gama maraan haa bobbaanu.
April 20, 2013 @ 7:40 pm
Dear Gguta Damoso,
Really thank you very much for your smart idea. Well put!!!
Sanyii tadassa nagasa said,
Obbo Ibsaa baay’een isin galateeffadha dhaamsa keessanirra wanan hin beeknee waan baay’een hubadhe akkasuumaan yaada nuuf dabarsaa.
April 21, 2013 @ 2:29 pm
Duraan dursee yaada keetiif galatoomi. Dhugumatti jechoota kee yoon ilaalu, onneerraa akka barreessiten hubadha. Kanaaf ammoo kabajan siif qaba. Garuu qabxiilee kaaste tokko tokkoon siif ibsuun yaala.
“…Waanuma Obbo Ibsaan dogoograniif atis duukaabuutee boolla bu’uu hin qabdu…”
Akka yaada fi amantaa kiyyaatitti, Obboo Ibsaan waan dogoggoran natti hin fakkaatu. Sabboonummaa ilaalchisee waanuma dhugaa ta’e lafa kaayan jedheen amana. Otuun ibsa isaanii kanatti amanuu baadhee, akka fakkeenyaatti hin kaasun ture. Karaa biraatiin ammoo, Obboo Ibsaa dhaaf kabaja guddaan qaba. Haa ta’u malee, isaanis ta’ee abbaa fedhe wajjinuu yoo dogoggoran isaan duukaa bu’ee boolla bu’uuf hamma kana sammuu hubachuu hin dandeenye waanan qabu natti hin fakkaatu. “…Maalif akka koo walabummaa Oromootti hin amanne jedhee hin balaaleffadhu. Maalif?”
Ani hiika sabboonummaa karaa sadiin ergan ibse booda, qabxii isa sadaffaa akka fakkeenyaatti keessaa fuudhee; isa kana akkamitti akka ilaalan hubachiisuuf ykn gaafachuuf malee, yaada kana waan hin qabneef isaan kun Sabboontotaa miti jechuu kiyyaa miti; isaan balaaleffachuus miti. Mee kunoo isa kana barreeffama kiyya keessatti irra deebi’ii dubbisi.
“…Wantin hubachiisuu barbaadu, ejjannoo kana waan hin qabneef yookaanis kaayyoo walabummaa kanatti waan hin amanneef jecha, ani gama kiyyaan akka ilma Oromoo tokkootti, jara (garee) kanaan isin Sabboontotaa mit jechuun na rakkisa. Haa ta’u malee, ammas gaafiin kiyya: Jarri kun hiika Sabboonummaa Oromoo kan akkanatti ibsame kana akkamitti ilaalu, akkamitti fudhatus? kan jedhu ta’a…”
“…Itoophiyaan ni diimkraatoftii fi ni dhiiftiin rakkoo keenya miti…warra jedhetu beeka, ni dandeenya erga jedhanii dhaqanii haa ilaalani, maalif balaaleffatamu ? maalif subboonummaan isaaniis shakkama…”
Akkuman kanaan duras, irra deddeebi’ee barruulee kiyya keessatti ibsaa ture, akka yaadaatti (theoretically) abbaan fedhe karaa danda’e fi itti amaneen qabsaa’ee ykn hojjetee uummata Oromoo gabrummaa keessaa baasuu yoo danda’e, ani ammas kanarraa rakkoo hin qabu. Warra yaada akkanaa qaban hin balaaleffanne, hin balaaleffadhus. Ani siriidhaa kana jedhaa ture fi ammas jedhu, erga hin oollee warri ilaalcha ykn kaayyoo tokko qaban maaliif walitti dhufanii tokkummaa kaayyoo hin ijaarree dha malee isaan balaaleffachuu kiyyaa miti. Ani kanan jedhu fi ejjannoon kiyya, Itoophiyaa diimookraatessuun yeroo baay’ee yaalamee waan hin milkaayiniif, ammas projektii hin milkoofne yaaluurratti yeroo fi humna keenya balleessuun eessanuu nu hin gahu amantaa jedhun qaba. Haa ta’u malee, namootni kanatti yoo amanan karaa kanaan yaaluun mirga isaanii ti. Gorsamuu malee balaaleffatamuu hin qaban jedheen yaada. Ammas irran deebi’a, hiika sabboonummaa barreeffama kiyya keessatti dhiyaate kana akkamitti ilaalu fi hubatuu dha malee saboonummaa isaanii shakkuu miti.
“…Kanneen subboonummaa ati baantu kana dafqaa fi dhiiga isaaniittiin magarsan keessaa tokko. Kanaaf yaa Abdii kiyyaa siinuu Oromummaa si barsiisanii…”
Qabsaa’otni keenya kan qabsoo kana keessatti gahee ofii taphatan ykn qooda ofii gumaachan;kan wareegama itti kaffalan, har’a ilaalcha biraa waan qabaataniif jedhee, kan isaan itti dafqanii fi dhiigan gaafii keessa hin galchine, hin galchus. Galata guddaa qabu; galanni isaaniis bilisummaa uummata Oromoo haa ta’un jedha. Dhugaa dha, warra qabsoo kana kessatti wareegama guddaa kaffalantu akka ija keenya banannu nu taasisan. Guddinni Oromummaas qabsoo isaan godhanirraa madde. Kun waan wal nama mormisiisuu mit. Garuu waayee saboonummaarratti akkuman armaan olitti ibse ta’a. “…Itoophiyaan yoo dimokraatofte Orommof bu’aa qabaachuu ni shakkitaa ? yoo milkaawaniif Oromoof bu’aa guddaa dha, yoo dadhabaniifis barnoota guddaa dha…”
Diimookraatayuu ishiitu na shakkisiisa malee, yoo dhugumatti kan diimookraatofti taate, Oromoodhaaf bu’aan hin argamu hin jedhu. Eeyyen, yoo projektiin kun milkaawe Oromoof bu’aa guddaa qaba. Yoo hin milkoofne garuu, ammas yeroo, humna, beekumsa, dandeettii fi qabeenya keenya irratti fixnee; bilisummaanis achi nurraa fagaachaa deema. Isa kana yaaddoon kiyya.
Kan kanarraa hafan, qabxiilee tokko tokko kan kaaste irratti waliif galla:
“…Daba waggoota dhobbaa oliif nu irratti raawwatamaa ture waggoota 20 fi soddomatti bade barbaadawwa amantaa jedhu hin qabu.
Kanaaf bifa kamiin iyyuu gabrummaa irraa sharafuun karaa fagoo gabaabsa jedheen amana
Walabummaa biyya isaaf ammo achi irraa ka’ee itti fufuun mirga isaa ti.
Namuu karaa itti fakkaateen haa yaalu
wal qoqqooduu dhiifnee karaa saba keenya itti aangessinu irratti gama maraan haa bobbaanu…” Eeyyen karaa dandeenyuun haa hojjennu, garuu ofeeggannoo guddaa barbaachisa.
Yeroo kee fudhattee yaada kee bal’inaan ibsachuu keetiif ammas galatoomi jechuun barbaada. Nagaatti
obbo ibsa hedu galatoomi malumaa saboonuma irra baradhee!